किन अनुहारमा पोतो आउँछ ? « नारी खबर >
किन अनुहारमा पोतो आउँछ ?
एजेन्सी । धेरैलाई अनुहारको छालामा कालो पोतो आएर हैरान भइरहेको हुन्छ । बिशेष गरेर महिलाहरुलाई गर्भअस्थाको बेलामा अलिबढी अनुहारमा कालो पोतो आउने गर्दछ ।
त्यसो त छालामा यस्तो खालाको दाग धब्वा सामान्य अवस्थामा पनि आउने गर्दछ । यस्तो खालको समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुने गर्दछ । किन आउँछ अनुहारमा यस्तो खालको समस्या ? यसको समाधान छ ? यसको कारण र समाधानको उपायको विषयमा केही उपायहरुबारे थाहा पाउनुहोस ।
हाम्रो छालाको माथिल्लो तहको भित्रपट्टि (इपिड्रमिसको स्ट्राटम सेल तहमा) मेलानिन सेल बसेको हुन्छ । यो छालाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा हुने सेल हो । छालाको रङ कालो, गोरो या अरु हुनुमा मेलानिनकै भूमिका रहन्छ । मेलानिन, हेमोग्लोबिन र क्यारोटेनी सेलले छालाको रङ निर्धारण गर्छ ।
मुख्य काम मेलानिनकै हुन्छ । मेलानिन सेल आफ्नो स्थानबाट हलचल भएर बाहिर निस्किएपछि पोतो र तिलकोठीजस्ता दाग निम्तिन्छन् । छालाको रङ निर्धारण गर्न नभइ नहुने तर अस्थिर हुँदा छालाको रङ नै बिगारिदिने मेलानिन गाँजर (क्यारोट) रङ र कफी रङको हुन्छ । सेतो छाला भएका व्यक्तिमा गाँजर रङको मेलानिन बढी हुन्छ भने कालो छाला भएका व्यक्तिमा कफी रङको मेलानिन बढी हुन्छ । पोतो काला र राता दुई प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिमा भएको मेलानिनको रङअनुसार बाहिर पोतो देखिने गर्छ ।
तिलकोठी कालो र खैरो हुने गर्छ । निधार, ओठको माथिल्लो भाग, नाक र च्यापुमा कफी रङको पोतो देखिन्छ । च्युाडोवरिपरि र घाँटीमा कालो रङको देखिन्छ । नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती अनुहारको पोतोले हैरान भएकालाई रातारात सफा गर्नुपर्ने हतारो हुन्छ । यस्तो फोहोर हटाउन कतिपयले लेजर प्रविधि प्रयोग गर्छन् । यो तरिकाले पोतो हटाउँदा छालाको नदेखिने बाहिरी पत्रसमेत फालिने गर्छ । छालाको पत्र जानु नै ठूलो गल्ती हो । पुरानो छाला फालेपछि नयाँ लेयर देखा पर्छ र यो निकै संवेदनशील हुन्छ ।
नयाँ लेयर विकसित हुन कम्तीमा २८ दिन लाग्छ । यो अवधिमा संवेदनशील छालामा घाम र फोहोरको असर बढी पर्न जान्छ । आफूलाई सुरक्षित गर्न नसकेपछि संवेदनशील छालामा झनै पोतोलगायतका समस्या बढी देखिने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले क्षणभरका लागि होइन, दीर्घकालका लागि समस्याको समाधान खोज्न मेलानिनलाई स्थिर राख्ने उपाय नै अपराउनु उत्तम हुन्छ । समस्याको समाधान पोतो र तिलकोठीजस्ता समस्या निम्तिन नदिन घामबाट जोगिने तथा सनप्रोटेक्सन क्रिम प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । तर, समस्या निम्तिसकेको छ भने मेलानिनलाई आफ्नो लेयरमा स्थिर राख्न भिटामिन ‘सी’ सेवन गर्नुपर्छ । समस्या कम गराउँदै लैजान घामबाट जोगिनै पर्छ ।
स्किन प्रोफेसनलसँगको परामर्शमा समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ । पोतो, कोठी आउनुमा तनावले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले तनावमुक्त हुनैपर्छ । छालामा पानीको ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ । यसका लागि हाइड्रेसन टोनिक लगाउनुपर्छ । रक्तचाप सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । असन्तुलित रक्तचापले मेलानिनलाई अस्थिर बनाइदिएर पोतो निम्त्याउन सहयोग गर्छ । ह्वाइटिनिङ क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले भित्र भएको मेलानिनलाई स्थिर राख्ने र छालाबाहिर निस्किएको मेलानिनलाई उडाइदिने काम गर्छ ।
१। छालामा पोतो निम्तिने मुख्य कारण घाम नै हो । घामको अल्ट्राभाइलेट किरण मेलानिनसम्म पुगेपछि मेलानिन अस्थिर बन्न पुग्छ । आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निस्किन्छ र छालामा यस्ता समस्या निम्तिन्छन् । समस्याको ९० प्रतिशत कारण घाम नै हो । १० प्रतिशत अन्य शारीरिक कारणले पनि हुने गर्छ । ४०–५० वर्षको उमेरमा सनस्पोट देखिने समस्या पनि आउँछ । यो उमेरमा आउने सनस्पोट सुरुमा कफी रङको हुँदै पछि कालोमा परिवर्तन हुन्छ । संवेदनशील छालामा बढी समस्या देखिन्छ ।
२। गर्भावस्थामा धेरैको अनुहारमा पोतो आउने गर्छ । गर्भावस्थामा शरीरमा कमजोरीपन हुने, हर्मोनहरू उतारचढाव हुने भएकाले मेलानिन सेलमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको हुन्छ । शारीरिक कमजोरीका कारण मेलानिन अस्थिर भएपछि अनुहारमा पोतो देखिन्छ । छालाको पनि संवेदनशील भागमा पोतो देखिन्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा अनुहारमा पुतली आकारमा पोतो देखिने गर्छ ।
३। पेटको समस्या भएकालाई पनि यस्तो समस्याले सताउँछ । कारण मेलानिनले आफ्नो ठाउँ छाडेर छालाबाहिर आउनु नै हो । मेलानिन स्थिर नरहेपछि नै समस्या देखिन्छ ।
४। कतिपयमा तिलकोठी वंशाणुगत हुने गर्छ । बच्चा अवस्थामै तिलकोठी देखिन्छ । ५–६ वर्षको छँदा देखिएको तिलकोठी घामका कारण झनै फैलिँदै जान्छ ।
भित्री बस्त्रको छनौटमा महिलाबाट हुनसक्छ यस्ता गल्ती
कपाल लामाे बनाउनले घरेलु उपाय तपाईंलाई थाहाँ छ !